Nin ganacsade caan ah oo maanta laga afduubtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin ganacsade caan ah oo maanta laga afduubtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho (DHAGEYSO)
Koox hubeysan oo aan heybtooda la aqoon ayaa maanta suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ka afduubtay nin ganacsade caan ah oo lagu magacaabo Cumar, kaas oo la afduubtay xilli uu furaayay bakhaar uu suuqaasi ku leeyahay oo lagu magacaabo Alfaraj.
Dhacdadaan afduubka ah ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ka dhacda gudaha magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2000, xilligaasi oo ay ugu dambeysay fal afduub ah oo ka dhaca magaalada.
Ganacsatada ku sugan magaalada Muqdisho, gaar ahaa kuwa ku sugan suuqa Bakaaraha ayaa walaac aad u xoogan ka muujiyay dhacdadaan cusub, waxayna dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen kadib ku guuleysteen ninka afduubka loo geystay in laga soo sii daayo kooxihii afduubka u geystay.
Dhinaca kale, kooxda afduubka geysatay ayaa dalbaday in la siiyo lacag madax furasho ah oo dhan $ 200 (Laba boqol oo doollarka Mareykanka ah), waxayna ninkaasi sii daayeen kadib markii la siiyay lacagtii ay dalbadeen.
Ugu dambeyntii, dhacdadaan ayaa noqonaysa dhacdadii ugu horeeysay oo layaabka laheyd oo muddo 16 sanno kadib ay ka dhacdo magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa weyn ee Bakaaraha, iyadoona qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ay maanta xireen dhamaan xarumahooda ganacsi ay ku lahaayeen halkaas.